ACCUGENCE ®Sistemụ nleba anya ọtụtụ (Model No. PM 900) bụ otu n'ime ọgbọ na-esote, sistemụ nleba anya nke ukwuu nke ukwuu dị na ọnụ ọnụ. Sistemụ nleba anya nke ukwuu na-arụ ọrụ na teknụzụ biosensor dị elu yana nnwale na ọtụtụ parametes gụnyere Glucose (CHINEKE), Glucose (GDH-FAD), Uric Acid na ketone Ọbara.
ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Model No. PM 950) na-eweta ahụmịhe nchọpụta ụlọ ọgwụ sara mbara, azịza njikọta na akụrụngwa zuru oke ọnụ iji nyere ndị na-eme njem aka ọrụ kacha mma enwere ike.
ACCUGENCE ® Sistemụ nleba anya ọtụtụ LITE (Model No. PM 910) bụ ihe ọzọ dị mfe maka ACCUGENCE PM900 nke na-enye gị ohere ịme ihe niile ị ga-atụ anya ya site na sistemụ nleba anya ọtụtụ nlele yana ọnụ ahịa dị ala ma e jiri ya tụnyere PM900.
ACCUGENCE ® Mpempe Nnwale Glucose Ọbara (CHINEKE) bụ eriri enzyme glucose oxidase (GOx ma ọ bụ CHINEKE) na -arụ ọrụ maka ma ụlọ ma ndị ọkachamara na ọnụ ọnụ.
ACCUGENCE ® Mpempe Nnwale Glucose Ọbara (GDH) bụ flavin adenine dinucleotide (FAD)-dabere na mpempe ule dabere glucose dehydrogenases na-arụ ọrụ maka ma ụlọ ma ojiji ọkachamara na ọnụ ọnụ.
ACCUGENCE ® Emebere eriri ule ketone ọbara maka ịlele oke nke ọkwa ketone ọbara n'ọbara dum yana yana ACCUGENCE usoro nleba anya ọtụtụ.
ACCUGENCE ® Ezubere Uric Acid Test Strip maka ịlele oke uric acid n'ọbara niile yana njikọ ACCUGENCE Sistemụ nleba anya ọtụtụ.
ACCUGENCE ® Emebere eriri ule haemoglobin (HB) kpọmkwem maka nha nha nke haemoglobin n'ọbara niile yana njikọ ACCUGENCE usoro nleba anya ọtụtụ.
Companylọ ọrụ kacha mma na -enyocha shuga, Ọbara ọbara na -ebu ọnụ 100, Ngwa Nnwale Nnwale Ọbara Ọbara, Spirometer nke pneumotachograph, Igwe Nnwale Ọbara Ọbara, 5.2 Ọbara shuga,